Waa maxay Canshuur Kordhinta Beero Cannabis ee Gobolka Illinois?
Xannaanada Gaaritaanka Cannabis iyo Canshuur-iibsashada Xashiishka ee Cannabis i
Muxuu sharcigu ka sheegayaa canshuurta mudnaanta u leh soo-iibsashada cannabis iyo iibiyaha xashiishka ee gobolka Illinois?
Qodobka 60 iyo 65 ayaa jabinaya sida canshuuraha loogu soo rogay ganacsatada xashiishadda ee Illinois. Qaybta 60 ayaa ka hadlaysaa Canshuuraha u gaarka ah Xashiishadda Cannabis ee ku taal Illinois, taas oo sharrax ka bixineysa inta canshuurta la dallaco, waxyaabaha alaabada u qalma canshuurista iyo sidoo kale sida lacagaha loo bixiyo iyo soo celinta ay soo direen beeraleyda xashiishadda. Qaybta 65, dhinaca kale, waxay sharxaysaa Canshuurta Soo Saarida ee Xashiishadda ee Magaalada Illinois, waxa ku jira iyo sida laga soo uruuriyay dadka soo iibsada xashiishadda.
Aqri si aad waxbadan uga ogaato qodobada 60 & 65 canshuuraha ee Illinois.
Laga bilaabo maalinta koowaad ee bisha Sebtembar 2019, 7% canshuurta mudnaanta daroogada cannabis waxaa lagu soo rogi doonaa iibinta xashiishadda ugu horreysa ee beeraleyda ku nool Illinois. Waaxda Dakhliga ayaa leh xuquuqda go'aaminta qiimaha xashiishadda marka;
(i) Iibiyaha iyo iibsaduhu waa wax wadaag
(ii) Ku wareejinta xashiishaddu maahan marin dhererka gacanta
(iii) Iibsaduhu wuxuu ku wareejiyaa xashiishadda hay'addiisa u adeegta ama u keenta taasoo aan la xaqiijin karin qiimaha xashiishadda.
Maqaalka ayaa sidoo kale bixinaya in qiimaha ay dejisay waaxdu ay la mid tahay qiimaha badeecadaha kale oo leh tayo, dabeecad, iyo adeegsiga aagga. Hadana aysan jirin alaabada noocaas ah, waaxdu waxay tixgelin kartaa badeecadaha gobollada kala duwan ee Illinois.
Sida ku xusan Canshuurta Dhiirrigelinta Xashiishka ee gobolka Illinois, waa mas'uuliyadda qofka sameynta iibka ugu horreeya (beeraley) inuu bixiyo canshuurta lagu soo rogay. Iibsadeyaasha soo socda sida ururada socodsiiya xaq uma laha inay bixiyaan cashuurta. Sharcigu, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u oggol yahay beeralayda inay lacagtooda soo celiyaan iyagoo ku soo dalacaya canshuur dheeraad ah oo qiimahooda ah.
Dhamaan beeraleyda cannabis ee bixiya canshuurta mudnaanta cannabis ee Illinois waxaa looga baahan yahay inay dalbadaan caddeyn iyada oo loo marayo Waaxda Dakhliga. Codsiyadaan waxaa lagu sameyn doonaa khadka tooska ah sida ku xusan shuruudaha waaxda.
Waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado in kaliya codsadayaasha shatiga leh ee hoos imaanaya Xeerarka Cannabis iyo Sharciga Canshuuraha ay u qalmi karaan in la siiyo shahaado.
Soo Noqoshada iyo Bixinta Canshuuraha Shaqsiyaadka Xashiishka
Dadka, oo bixiya canshuurta mudnaanta daroogada cannabis ee Illinois, waxaa laga rabaa inay soo celiyaan 20 ama wixii ka dambeeya bisha ugu horreysa. Soo laabashada waa inay cadeysaa:
(1) Magaca cashuur bixiyaha;
(2) Cinwaanka cashuur bixiyaha, iyo cinwaanka muuqaalka ganacsiga;
(3) Risiidhada billaha ah ee xashiishadda bishii hore;
(4) Lacagta laga helo iibka waqtiga;
(5) Baadhitaanno sida uu sharcigu farayo;
(6) Risiidhada guud ee bisha ku xigta bisha xereynta oo loo isticmaali doono xisaabinta canshuurta;
(7) Tirada cashuurta lagu leeyahay;
(8) Saxiixa cashuur bixiyaha; iyo
(9) Faahfaahin kasta oo kale sida ay wasaaraddu u baahan karto.
Dhamaan soo celinta iyo lacag bixinta waa in lagu sameeyaa si elektaroonig ah. Cashuur-bixiyeyaasha oo ay ku adkaato inay ku bixiyaan elektaronig ahaan elektaroonig ah waxay Waaxda ka codsan karaan ka-dhaafista aaladda korantada.
Cashuur-bixiyeyaasha noocan ah waxaa laga yaabaa in looga baahdo inay xareeyaan soocelintooda si gooni ah ama ay ugu daraan celinta cashuurta iyada oo la raacayo Sharciga Barnaamijka Iskuduwaha Xannaanada Caafimaadka.
Cashuur-bixiyeyaasha waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan lacag-bixin saddex-biloodle ah taariikhda ama kahor taariikhda 7, 15, 22, iyo maalinta ugu dambeysa bil kasta. Haddii cashuur bixiyuhu ku guuldareysto inuu bixiyo lacagta saddex-biloodlaha ah waqtigii loogu talagalay ama uu bixiyo wax ka yar wixii loo baahnaa, wuxuu la kulmi karaa ciqaab ama danaha. Haddii ay dhacdo in lacagta la bixiyay ay ka badato waajibaadka canshuurta ee loo baahan yahay, qofku wuxuu codsan karaa warqad tixraac kahor inta uusan dhammaan 30 maalmood kadib taariikhda bixinta.
Dhammaan bixinta lacagta canshuurta mudnaanta cannabis waxaa lagu soo shubayaa Sanduuqa Xeerarka Cannabis.
Maxaa Kaciyaya Iibka Cashuur-dhaafka Macaamiisha iibka ee gobolka Illinois?
Canshuurta iibsiga Xashiishadda ee gobolka Illinois ayaa la bilaabi doonaa in la soo rogo Janaayo 1, 2020. Canshuuraha waxaa lagu soo rogi doonaa iibsadayaasha xashiishadda heerar kala duwan sida soo socota;
(1) Xashiishad kasta, oo aan ahayn sheyga cannabis-infused, oo leh heer la isku habeeyay ee delta-9-tetrahydrocannabinol ama ka hooseeya 35% waxay qaadi doonaan canshuur taas oo noqon doonta 10% qiimaha xashiishadda.
(2) Xashiishad kasta, oo aan ahayn sheyga cannabis-infused, oo leh heer la hagaajiyay oo la habeeyay oo loo yaqaan 'delta-9-tetrahydrocannabinol' oo ka sareeya 35% ayaa qaadi doona canshuur oo noqon doonta 25% qiimaha xashiishadda. iyo
(3) Alaabada xashiishadda cannabis-ka ah waxaa lagu canshuurayaa 20% xaddiga iibsashada.
Sidee Canshuurta Canshuurta ee Xashiishka loogu aruuriyaa Illinois
Sida ku xusan sharciga, canshuurta iibsiga xad dhaafka ah waxaa soo ururiyaa dukaammada. Waxay tan u sameeyaan iyagoo ku daraya mas'uuliyad canshuureed qiimaha ay iibsaduhu bixiyaan si ay xashiishadda uga soo iibsadaan dukaanka.
Caddadka canshuurta la soo uruuriyay waxaa lagu soo dallacayaa sicirka kor lagu soo sheegay, kaas oo markaa dib loogu celinaayo Waaxda Dakhliga.
Haddii dukaanle ay ku soo oogto iibsade canshuur ka badan inta looga baahan yahay Canshuur-dhaafka Soo iibsiga Xashiishka ee Illinois, iibsaduhu wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado soo-celinta. Iyo kiisaska halka uu iibsaduhu canshuur ka qaadin, markaa iibsaduhu waa inuu bixiyaa lacagtaas maalinta ama kahor 20ka bisha ku xigta bisha iibsashada.
Sida uu dastuurku qabo, waa mas'uuliyadda mulkiilaha dukaamada inay aruuriyaan Canshuur-dhaafka Soo-iibsiga Xashiishka ee Magaalada Illinois. Haddii tafaariiqda daroogada cannabis ay aruuriso canshuur iyo haddii kale, canshuurta dhan ee ay tahay in la soo uruuriyo waxaa loo tarjumi doonaa deyn ay tafaariiqda ku bixinayso dowladda.
Diiwaangelinta Rakhiibiyaasha Xashiishka
Dhammaan tafaariiqleyaasha soo qaada canshuurta ee hoos yimaada Xeerarka Cannabis iyo Sharciga Canshuuraha waa inay si elektaroonig ah ugu codsadaan caddeynta.
Dastuurku wuxuu qorayaa in dukaameeyuhu xaq u yeesho caddeynta, waa inay shati shati leeyihiin.
Kaarka Aqoonsiga Wakiilka Xarunta
Kani waa dokumenti aqoonsi oo la siin doono wakiilada xarunta dalaga ee mas'uul ka ah maareynta iyo hubinta in xarumahaasi yihiin kuwo sharciga waafaqsan. Dukumintigaan waxaa soo saari doona Waaxda Beeraha.
Dukaanle kasta waxaa looga baahan yahay inuu hayo diiwaan sax ah oo xashiishadda iibsaday, hayo, iibiyay, ama ku tuuray. Waa inay sidoo kale ilaashadaan dhammaan qaansheegyada, diiwaangelinta iibka, biilasha, iyo waraaqaha kale ee la xiriira iibka iyo dabeecadda xashiishadda.
Dukumiintiyadan wax soo iibsiga waa in lagu hayaa dhismayaasha shatiga leh ee aan ka yarayn 90 maalmood laga bilaabo maalinta la soo iibiyay mooyee haddii ay jirto dhaafitaan ay sameyso Waaxda Dakhliga ee lagu soo qoro qoraal.
Dukumentiyada waa inay sidoo kale joogi karaan goobta inta lagu gudajiro saacadaha shaqada ee caadiga ah waana inay diyaar u ahaadaan kormeerista shaqaalaha waaxda iyo wakiillada idman.
Shaqaalaha waaxda waxay awood u leeyihiin inay xiraan, baaraan meheradaha cannabis, ama ka qaadaan xashiishadda dukaannada ku xadgudba wax kasta oo ku saabsan falkan.
Canshuuraha lagu soo rogay xashiishadda si loo sharciyeeyo isticmaalkeeda gudaha Illinois waxaa si toos ah loogu soo rogay beeraleyda iyo iibsadeyaasha xashiishadda. Beeraleyda xashiishadda cannabis waxay ku siisaa Canshuurta Dhiirrigelinta Xashiishadda ee gobolka Illinois mudnaanta ay ka leedahay ka soo goynta dalagga, halka kuwa wax iibsadaa ay ku bixiyaan Canshuur-dhaafka Macaamiisha iibsiga Cannabis ee Illinois faa'iidada u leh isticmaalka cannabis.